FINDAY EFA SIMBA AVY ANY CHINE NO AMIDY ETO MADAGASIKARA DIA MODY ATAO MORA VIDY
Hosoka sy fanambakana Malagasy tanteraka, izany no afitsok’ity toera-pivarotana finday iray izay tananina teratany Sinoa ao amin’ny Immeuble Digital World etsy Analakely. Toera-pivarotana lehibe vaovao na irony antsoina hoe “centre commercial”, irony no misy azy ity ka etsy akaikin’ny IHS na Institut d’Hygiène Sociale, Analakely, ny marimarina kokoa ampitan’ny toera-piantsonan’ny taksibe 164, mankany Ambohipo no misy azy io. Tsy misy anarana ilay fivarotana fa toy izao no soratra eo ambony varavarana : “ Manamboatra finday simba, mivarotra finday”. Marihina fa finday marika malaza isan-karazany, toy ny Nokia, Sagem…, vita sinoa no amidin’ity trano fivarotana ity.Tsy mihoatra ny 40.000 Ariary ny finday iray.
Dia maro ny Malagasy no roboka sy mividy finday ao satria dia eo amin’ny 25.000 Ariary monja dia efa mahazo finday . Anisan’ireo izay nividy finday tamin’izany toerana izany ny tenanay. Rehefa natao ny andrana dia nandeha ihany ilay finday. Nofahanana ny bateria, ora telo no voalaza fa faharetan’ny famahanana. Ary ny tena olana dia ora iray taorian’izay dia nitsipaka toy ny tsy teo ilay fahana. Dia lasa niverina tany amin’ilay toera-pivarotana ny ampitson’ilay andro nividianana azy io izahay. Akory anefa ny avonavom-bavan’ilay tovovavy mpivarotra. “Tsy misy “garantie” ny finday vidina eto ka tsy afaka ny hanolo ny baterinao izany izahay, mandehana mividy bateria vaovao dia soloy. Atsy ambadika atsy misy mivarotra…”. Izany ve dia mba fomba fiteny sy fanajana ny mpividy ? Dia mba niezaka niresaka tamin’ilay sinoa lahy tompon’ny trano fivarotana indray ny tenanay. Asa na mody tsy mahay teny gasy ity sinoa lahy ity, na tena tsy mahay fa nodiany fanina fotsiny ny fanazavana nataonay. Niezaka nanazava tamin’ny teny frantsay indray sao dia izay no mahametimety kokoa ny resaka, kanefa dia vao mainka nojereny fotsiny ny tenanay niresaka taminy. Farany, tezitra ihany ny tena ka izay vao nisoka-bava ilay sinoa. Toy izao no mba hany teny nivoaka ny vavany : “Tsy misy garantie, tsy misy garantie”.
Nandritra izany resaka rehetra izany dia nisy olona maromaro niteny fa efa voa tao amin’ity toeram-pivarotana finday ity ihany koa. “Ny anay koa tsy nandeha ny bateria fa vao avy feno dia avy hatrany dia mitsipaka. Tsy mety manolo mihitsy io sinoa lahy io, fa asainy mividy atsy ambadika izahay…”. Raha izany no jerena dia finday efa fanary avy any Chine any no mody amidy mora eto Madagsikara mba hanambakana ny teratany Malagasy. Fantany manko fa ny Malagasy kely vola ka mora ny hanambakana azy. Eto Madagasikara no azo anariana ny fakony izay efa tsy miasa any aminy intsony, kanefa azo avadika ho vola. Dia samy niala maina izay rehetra tonga hanolo bateria satria dia tsy nety nanolo mihitsy ilay sinoa lahy. Ireo izay tsy mbola voa kosa dia mbola maro no roboka nividy.
Hafatra, aza sodokan’ireny finday vita sinoa mora vidy ireny fa hosoka sy halatra fotsiny ireny. Raha ny vidin’ilay finday nampiana ny vidin’ny bateria vaovao dia efa nahazoana finday tsara. Toa mitombina ihany ilay fiteny hoe : “Ny tsara tsy mba mora ary ny mora tsy mba tsara”.